AMD Radeon RX 6800: Linux bvunzo dzinotanga izvozvi | Linux Vakapindwa muropa
Itsva AMD Radeon RX 6800 vakapa mhedzisiro inoshamisa. Simba rakakura reNVIDIA GeForce RTX 3090 raiita kunge risingakwanisike, asi chokwadi ndechekuti mune kumwe kuyedzwa chaiko kwavakasvika, mune vamwe vanogara padhuze zvakanyanya uye, mune dzimwe nguva, kuvapfuura. Mhedzisiro huru kubva kuiyi nyowani nyowani kubva ku AMD.
Uye zvakare, ivo havangove neakanyanya kuita, asi ivo vakachipa, vanopisa zvishoma, uye vanoshandisa mashoma simba. Naizvozvo, mifananidzo yemakadhi kubva ku AMD zvese zvakanaka. Ivo vari kunyatso kuziva maitiro ekudzokera vese vari mudunhu reCPU neGPU. Munguva pfupi iri kubudirira mushure mekubudirira ...
Aya matsva AMD Radeon RX 6800 uye XT atanga kusvika mamwe mamodheru ku Linux Vaongorori, saka maGPU ese ari kutoyedzwa kuti aone mhedzisiro yekuita. Izvi zvinogona kuratidza kuti mhedzisiro yacho ndeyechokwadi, nekuti zvikasadaro makadhi aya aisazotumirwa bvunzo dzebhenji.
Kumirira ivo kuti vatadze kunodzivirira kutumira makadhi. Zvinotendwa, kunyangwe hazvo ruzivo rwusati rwaziviswa, izvo AMD ine tariro kwazvo nezve mashandiro anoita aya makadhi emifananidzo anoenderana neiyo RDNA2 microarchitecture inogona kuita muLinux. Iyo data ichakurumidza kuzarurirwa kusimbisa runyerekupe urwu ...
Kana ivo vakanaka sekugona kufungidzira, nyika yekutamba pasi peLinux ine rombo rakanaka, nekuti nesimba reiyo vhura sosi giraidhi madhiraivha ye AMD yeiyo maGPU, uye mashandiro ayo anouya nemifananidzo mitsva iyi, inogona kuve yakanaka tandem. Ndinovimba izvi zvinozadzikiswa neakakura maAAA kuburitswa munyika yemitambo yemavhidhiyo, inova mufaro wechokwadi wevatambi.
Uye zvakare, iyo yekumhanyisa yakaziviswa zvakare AMD Radeon Instinct MI100 Arcturus uye ROCm 4.0 (Radeon Vhura Computer). Nenzira, GPU ine AMD iri zvakare pamberi peNVIDIA, sezvo iri kadhi rekutanga kuwana gumi TFLOPS yekaviri chaiyo yakanyatsoyerera poindi (FP10) kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » vatyairi » AMD Radeon RX 6800: Linux bvunzo dzinotanga